I-catfish okanye 'isicoci sedama' | Ngeentlanzi
El intlanzi yekati ikwaziwa njenge 'pacifier' okanye 'ukucoca iiphuli', ngaphezu kwayo nayiphi na into kuba lo mzekelo uyanceda ukugcina i-aquarium icocekile. Lithwele elo gama ngenxa yeentshebe ezisentloko yalo ezifanayo nezo zeentsimbi. Abanye bade bacoce iindonga zetanki leentlanzi igcina i-aquarium ikwimeko efanelekileyo. Zifezekile ukuzibeka nakweyiphi na itanki yeentlanzi.
Ekuphela kwento ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa ibandakanywa bubungakanani betanki, kuba ezi ntlanzi zifika kwi-30 cm ubude, kwaye oku kunokuba yingxaki yokwenyani kwi-aquarium ukuba yimilinganiselo eqhelekileyo. Kuya kufuneka ukhethe i-catfish kwezona ntlobo zayo zincinci ukuba i-aquarium yakho incinci.
Umsebenzi ophambili wekatfish owenzayo Gcina itanki yentlanzi icocekile. Ngokutyisa iintlanzi ngaphezulu kwe-aquarium, okunye ukutya kuyanyanzeliswa ukuba kuphele emazantsi e-aquarium. Ngaphandle intlanzi benthicNjenge catfish yokutyisa nzulu, ukutya okungatyiwa kungayidyobha itanki kwaye kunciphise umgangatho wamanzi ukuya kwinqanaba eliyingozi.
Nangona kunjalo, xa ukhetha intlanzi, khumbula ukuba kunjalo uhlobo lwendawo kakhulu Zombini kunye nezakho kunye nezinye ezahlukeneyo, ke ukuba uyaqaphela ukuba kukho ukungqubana, kubalulekile ukubahlula. Nangona kukholelwa ukuba icatfish itya kuyo yonke into efunyanwa ezantsi kunye nobulembu obucocekileyo, akunjalo ukuba zitya ngendlela efanelekileyo njengentlanzi iphela.
Kananjalo akufuneki silibale ukuba zi iintlobo zetropiki Kwaye ke kufuneka isifudumezi ukugcina amanzi kubushushu obuchanekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ikati okanye 'abacoci bamachibi'